Absolute Boyfriend manga • MMOtaku
Start From Here	Get Anime
About	Anime Lists	Baka Weekly	G+
Manga	21st September 2011	Absolute boyfriend isamanga written by Yuu Watase.one thing is this manga contain romance as well as shoujo , comedy,tragedy and science fiction.it isareally full of saddness manga i’ve ever watch …. (hee hee … i really cry in the last episode and can’t stop my tears .. 😛 )the summary is …
Riiko Izawa isahigh school girl who had never hadaboyfriend. (how pity 😀 ). she had always been rejected by the guys whom she hadacrush.one day on her return form school,she foundacellphone.later she returnedalost cell phone toastrange sale person, she saidawish that she want to haveaboyfriend.(aung ma lay lay yuu lite tar ….. )to thank her the sale person give his company’s website to fine one. she thanked him and she orderedafigure from that web.the next day, the sale person arrive to her home withavery big box.when the open the box,inside she saw the figure she ordered.and the sale person sad that she have to kiss that figure by kissing.she names him “Night”.
Many problems have came between Riiko and Night.later, Riiko have fallen in love with Night.and also there wasaLove trangle between Night and her childhood friend Soushi Asamoto.but she knew that her true love was for Night,she apologize Soushi …….
what’ll soushi answer?? try this anime 🙂
december4boy says:	September 21, 2011 at 9:56 pm	anime or manga??
yumiko23 says:	September 22, 2011 at 9:02 pm	of cuz. it is manga!!!!!
Itazura na Kiss	ဒီ anime လေးက ကျောင်းမှာ အတော်ဆုံးကောင်လေးနဲ့ အညံ့ဆုံးကောင်မလေးတို့ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးပါ. ဒါပေမယ့် တစ်ခုရှိတာက သူ့ရဲ့ဇာတ်သိမ်းက အခြား romance anime တွေနဲ့မတူတာ
Dengeki Daisy	“ညီ​မေ​လး၊ ဘာ​ပဲ​ လို​လို၊ တ​ခုခု ​ရင်ဖွ​င့် ချင်ရင်ပဲြ​ဖ​စ်ြ​ဖ​စ်၊ Daisy ကို ​ဆက်သွယ်ပါ ” လို့​ မှာ​သွား ​ခဲ့​တ​ယ်။ Teru တေ​ယာ​က် သူမ​ အစ်ကို
Skip Beat !	ဒီ Review ဖတ်ပြီးကြိုက်မကြိုက်တော့ မသိဘူး ။ Anime ကြည့်လိုက်ရင်တော့ ကြိုက်သွားမှာသေချာတယ် ။ အဲဒီမှာကြိုက်တာက Kyoko ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကြိုက်တယ် ။ ကျုပ်သာ သူ့နေရာမှာ
Kare Kano	ဒီကားလေး က Special A တို့၊ Kaichou wa Maid Sama လိုမျိုး စာပြိုင်ဖက် ကျောင်းသူလေး နဲ့ ကျောင်းသားလေး တို့ရဲ့ အချစ် ဇာတ်လမ်းလေး ပါ။ Maidsama ထဲက Ayuzawa ရဲ့
Arrancar Saga အေ�...	Bleach Fans တွေထဲမှာ Rukia Fans တွေနဲ့Orihime Fans တွေ ရှိတယ် လို့အကြမ်းဖြင်း သတ်မှတ်လို့ ရပါတယ်။ အဲဒီ အပြင်က fans တွေက အဲဒီ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ရင် အကြီး အကျယ်
Chihayafuru	Chihaya Ayase ဆိုတဲ့ tomboy ကောင်မလေးဟာ သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံး မော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ သူအမကို အကူအညီပေးချင်ရုံ သက်သက်နဲ့ပဲ ဘဝကို ဖြတ်သန်းချင်ခဲ့သူ တစ်ခုပါ။ အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်က တစ်နေ့မှာတော့…
Canaan	ရှန်ဟိုင်း NBCR International Anti-Terrorist ညီလာခံ အတွက် ရှန်ဟိုင်း ကို သတင်း ယူဖို့ အတွက် သတင်းထောက် ၂ယောက် ကို စေလွှတ် ခဲ့တယ် ။ သူတို့ ကတော့ Maria Osawa နဲ့ November 12th, 2012
Ano Hi Mita Hana no Na...	Ano Hi Mita Hana no Namae o Bokutachi wa Mada Shiranai အဲ့ဒီနေ့က မြင်လိုက်ရတဲ့ပန်းကလေးရဲ့နာမည်ကို ကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူး… အဲ့ဒါကတော့…
© MMOtaku 2013	khay.me
Channel [J]	YGN Otaku Organization